Hadda oo ay Hyundai ka baxday sawirka, yaa ku dhiiran doona inuu dhisto Gaariga Apple? | Waxaan ka socdaa mac
Kadib xiisadaha u dhexeeya Apple iyo Hyundai Waxay umuuqataa inay cadahay in soosaaraha gawaarida aan dib loo dooran doonin inuu soo saaro waxa uu noqon doono Apple Car.Hadda falanqeeyayaashu waxay isku dayayaan inay ka fekeraan cidda laga yaabo inay tahay murashaxa ku habboon ujeedkan. Waxyaabaha ma sahlana maxaa yeelay maahan ganacsi caadi ah mana sahlana in la horumariyo. Ayaa ku dhiiran doona sameynta gaariga Apple?
Taas ka dib Hyundai dembi samir waxayna daabici doontaa faallooyin kala duwan oo ku saabsan wadahadalada, Apple waxay go'aansatay inay joojiso wadahadalka. Taasi ugu yaraan waa waxa falanqeeyayaashu u maleynayaan iyo sidaas darteed mar dambe Korean-ku ma soo saari doonaan mustaqbalka Apple Car. Ayaa ku dhiiran doona sameynta gaariga Apple?
Taasi waa su’aasha dhammaan falanqeeyayaasha Apple ay hadda isweydiinayaan. Waxaan sidoo kale isweydiineynaa isla su'aasha, dhamaan kuwa raacsan magaca oo ka warqaba wararka ugu dambeeyay ee lagu daabacay Soy de Mac. ma ahan ganacsi fudud maxaa yeelay labada magacba, cidda ay doonaanba ha ahaadeene, waxaa loo isticmaalaa fulinta mashruucyadooda u gaarka ah kharashkooda iyo dhibaatooyinkooda.
Xaaladdan oo kale, waa amar ka yimid Apple oo ku socda astaanta gawaarida. Tani waxay ku shaqeyn lahayd dalabka iyo dhammaan mudnaanta waxay lahaan doontaa Apple yaa mas'uul ka ahaan lahaa naqshadeynta iyo teknolojiyadda gaariga lagu soo daray. Si kastaba ha noqotee, haddii ay jiraan shilalka gawaarida eedda ayaa isla markiiba ku dhici doonta gawaarida. Taasi waa sababta ay u adag tahay in la helo shirkad la wareegta.
Khabiirada kaliya ma heli karaan lammaanaha ugu fiican ee Apple
Khubarada ayaa falanqeeyay noocyada kala duwan ee suuqa, laakiin dhamaantood dib u dhac baa ku yimid kaas oo ka hortagi kara waxsoosaarka inay dhacaan:
Dhowr shirkadood oo gawaarida Japan ah ayaa sidoo kale la isla dhexmarayaa, laakiin Warbixinta CNN Waxay u egtahay in shirkadaha waawayn ee wadankan badankood ay doorbidaan oo aysan qaadin talaabada ugu horeysa. Maskaxda ku hay in heshiis wax soo saar qandaraas ah uu ka tegayo gawaarida xaalad la mid ah tan Pegatron iyo Foxconn, kuwaas oo isugu keenaya iphone-ka Apple laakiin ma gudi doonaan abaalmarinta dhaqaale ee weyn.
Taasi waa waxa waxay rabaan inay ka fogaadaan astaamaha baabuurta waaweyn soo saara. Waxay rabaan inay ka fogaadaan wixii aan kor ku soo sheegnay. Inaadan helin soocelin ku filan maalgashigan.
Ubax Diini ah, Falanqeeyaha aduunka ee Commerzbank wuxuu yiri:
Volkswagen waxay dooneysaa inay soo saarto barnaamijkooda wadista gawaarida iskeed u gaar ah, waxay doonayaan inay abuuraan nidaam ay ku shaqeeyaan. Waxay rabaan xakameyn xogtaada oo kula tartam Teslas-ka adduunkan iyo qof kasta oo kale oo soo baxa.
Tan tan - Jürgen Pieper, Falanqeeyaha baanka Jarmalka Metzler ayaa intaa ku daray:
Volkswagen ma rabto inay ka mid ahaato dhinaca shaqaalaha la shaqaaleeyay waana inay marwalba sameysaa waxa "madaxa" doonayo inuu sameeyo. Baabuurta waaweyn ayaa leh kuwa ugu badan ee lumiya. Ma doonayaan inay albaabka u furaan Apple.
Dareenkan markaa, waxay umuuqataa in shirkadaha yar yar, ugu yaraan xagga gawaarida, ay u furnaan karaan heshiis. Honda, Nissan, Stellantis iyo BMW waxaa jira afar ku habboon xaaladda gaarka ah. Waxaa laga yaabaa in BMW ay u yara eegto si ka duwan sidii hore, iyadoo leh: Hagaag, mar uun waa inaan aqbalnaa in Apple uu galay ganacsiga mootada, haddii ay taasi dhacdana, waxaan dooneynaa inaan noqonno lammaane halkii aan ka ahaan lahayn qof kale.
Apple waxay isku dayi kartaa inay ka fogaato dagaallada ku saabsan calaamadeynta iyo xakameynta hal abuurka ah iyadoo kireysaneysa qandaraasle soo saare sida Magna, iyo inay horeyba u sameyso gawaarida shirkadaha kale ee soo saara gawaarida sida Mercedes-Benz, Toyota, BMW iyo Jaguar.
Noocyada suurtagalka ah ee aan aragnay ayaan ku sii dheereyn ciyaarta maadaama heshiiska Hyundai uu dhammaaday. Marka wax waliba way dhici karaan iyo hadda waa sidii oo laga soo bilaabo xoq. Dabcan, wax walba oo aan ku barto Hyundai oo aanan shaqsiyan meesha ka saarin si qaas ah. Waxaa laga yaabaa inay dhammaantood ahaayeen xanaaq daqiiqad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Hadda oo ay Hyundai ka baxday sawirka, yaa ku dhiiran doona inuu dhisto Gaariga Apple?
12 × 18 Podcast: Dhegeystayaasha Weydiiyaan, Waan Ka Jawaabaynaa